Samsung's Exynos 8895 processor nwere ike ịrụ ọrụ na 4 GHz | Akụkọ akụrụngwa
Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ Korea malitere imepụta ndị nrụpụta nke ya, dị ka Apple na-eme afọ ole na ole, ịdabere na Qualcomm belatara, ihe onye nnukwu ọrụ ahụ agaraghị anọ ọdụ nke ọma na-atụle na ndị Korea bụ emeputa na-ere ọtụtụ ngwaọrụ n'ụwa nile.
Nke nta nke nta Samsung na-emezu ya processors na ọbụnadị iti ụfọdụ ụdị asọmpi kachasị ọhụrụ. N'ezie, ihe mgbakwunye Exynos 8890 processor na Galaxy S7 na S7 Edge na-enye arụmọrụ ka mma karịa Snapdragon 820 sitere na Qualcomm, ọ bụ ezie na ekwuru ihe megidere ya na mbụ.
Ugbu a, ọ bụghị naanị na a na-eji ndị na-arụ ọrụ Samsung na ngwaọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, mana ndị Korea amalitekwala ịre ya ndị nrụpụta nke atọ, na-abanye iji sọọ mpi na site n'aka gị na Snapdragon, ihe na-agaghị atọ ụtọ ọ bụla. nye ụmụ okorobịa na Qualcomm. Ihe nhazi ohuru Qualcomm si Snapdragon 823 nwere ike iru nhazi nhazi ihe ruru 3,6 GHz na-enye karịa oriri a gbanwere agbanwe. Mana n'oge a anyị nwere ike ịsị na onye ahụ na-eso ụzọ karịrị nna ya ukwu karịa Exynos 8895 karịrị ọsọ elekere nke processor Qualcomm kachasị ọhụrụ.
Ezigbo mgbanwe ahụ abịarutewo na nke ọhụrụ Exynos 8895 na dịka ọkwa ọrụ teknụzụ izizi agbapụtara nwere ike iru ọsọ ọsọ ruo 4 GHz. Na ọnụ nwere ike iru ọsọ ọsọ a ga - abụ ihe taa na - erubeghị n'ọtụtụ kọmputa, ebe ọ bụ naanị maka ebumnuche maka ọdụ ndị a na - arụkarị iji gwuo egwuregwu ma jiri mmemme imepụta. N'oge ndị nhazi a kwesịrị rute n'ahịa jiri ụdị Samsung ndị ọzọ, S8 na S8 Edge na 8 Galaxy Note. Onye mbụ kụrụ ahịa ahụ ga-abụ S8, nke a ga-ewepụta na mmalite nke afọ na-esote dị ka ọ dị na mbụ na Galaxy S.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Samsung's Exynos 8895 processor nwere ike ịgba ọsọ na 4 GHz
Vivaldi 1.3 na-ebupụta nhọrọ nhazi nke ọhụụ